महराका छोरा पनि छानबिनमा ? – agrimnepal
महराका छोरा पनि छानबिनमा ?
Agrim Nepal | बिहिबार, कार्तिक २१, २०७६ | Comments
काठमाडौँ, कात्तिक । बिवाहेत्तर सम्बन्ध नेता कृष्णबहादुर महरालाई निकै महंगो प¥यो । त्यही कारण उनले सभामुख पद मात्र गुमाएनन् एक महिना प्रहरी हिरासतमा समेत बिताउनुप¥यो । ३० वर्षपहिलेदेखि चिनजानकी एक महिलाका कारण उनको राजनीतिक ‘करिअर’ लगभग समाप्त भयो । संसद सचिवालयमै नर्सका रुपमा कार्यरत रोशनी शाही यी सबै घटनाकी कारण थिइन् । यसमा महरा मात्र नभई उनको परिवारको समेत गल्ती रहेको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन । महरा र रोशनीको सम्बन्धबारे माओवादीका धेरै नेतालाई थाहा थियो । उनको परिवारलाई थाहा नहुने कुुुरै भएन ।
पछिल्लो समय महरा र रोशनीको विवाद बढेको थियो । त्यसो त महराकी श्रीमती सीता र छोरा निर्मललाई जानकारी थियो । रोशनीले आफ्नो पदस्थापन काठमाडौंमै गरिदिन लगायत विभिन्न माग राखेकी थिइन् । त्यसपछि महरापत्नी र निर्मलले रोशनीलाई धम्काएको स्रोत बताउँछ । असोज १२ गते सम्झाउन समेत भनेर महरा रोशनीको डेरामा गएका थिए । त्यहाँ दुवै जनाबीच कुटाकुट भएको थियो । त्यही कारण उनी मिडियामा गएकी थिइन् ।
तेस्रो दिन नै उनले बोली फेरिकी थिइन् । तर, महरा निकट व्यक्तिहरुबाट उनलाई धम्की दिइएको थियो । त्यही कारण उनले महराविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएको स्रोत बताउँछ ।स्रोतका अनुसार महरा पुत्र निर्मलले रोशनीलाई पटक–पटक धम्कीपूर्ण एसएमएस र फोन गरेका थिए । त्यो खुलेपछि प्रहरीले निर्मलसँग समेत सोधपुछ गरेको थियो । उनको मोबाइलसमेत परीक्षणका लागि मागेको थियो । तर, आफ्नो कुनै कुरा नै नभएको भन्दै उनले प्रहरीलाई दिन मानेनन् । सर्वसाधरण भएको भए प्रहरीले उनलाई समेत थुनामा राख्न सक्ने अवस्था थियो । तर, प्रहरीले उनको मोबाइलसमेत झिकाउने प्रयास गरेन । त्यस्तै महराले रोशनीलाई पटक पटक एसएमएस पठाएका थिए । त्यो मोबाइल समेत बरामद गर्न नसक्दा प्रहरी अनुसन्धान कमजोर बनेको छ । महरा पत्नीले आफूले सो मोबाइल फुटाइदिएको भनेर प्रहरीसँग कागज गरेकी छिन् ।
हिन्दु राष्ट्र बनाउने जागरण अभियानमा रेखा थापालाई हेर्नेको भिड
फेवातालमा डुंगा चढ्दै बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिद
आज बङ्गलादेशका राष्ट्रपति हमिदको पोखरा भ्रमण गर्ने
६६ वर्ष पहिल्यै लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भारत र चीनबीच सम्झौता !
एकै पटक ७२ देशमा नेपाल भ्रमण वर्षको सन्देश